အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်တွဲယာဉ်: သင့်ရဲ့ဘေးမှာဒိုင်နိုဆော DNA ကိုအတူရှုပ်ထွေး” Lanre Bakar ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 25 ရက်နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2014 19.15 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ယခုသင်၌နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်အဘို့အကို "သင့်လျော်သော" နောက်တွဲယာဉ်ကိုကြည့်ရှုနိုင် - Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလားထက်အခြားလုံးဝဘာမှမဒိုင်နိုဆောမည်ဖြစ်သည်ပြောရာ - သငျသညျ 15-ဒုတိယကြော်ငြာအတိုဖူး ထိုသမိုင်းမတင်မီဂိမ်း. ဒီမှာရဝုဏ်အခြေခံပညာဖြစ်ပါသည်. အစုံ 22 မူရင်းပြီးနောက်အနှစ်, ယခုမိဘများ Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလားမှခရီးစဉ်အပေါ်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေချွတ်ထုပ်ပိုးနေကြတယ်, Disneyland နှင့် SeaWorld အကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်နဲ့တူလှပါတယ်တဲ့ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ / Dino-ဓာတ်ခွဲခန်း.
အဆိုပါနောက်တွဲယာဉ်သူမ၏သား Gray ပြောပြမိခင်တစ်ဦးနှင့်အတူပယ်စတင်ကျင်းပသူမတကယ် "ဒီခရီးစဉ်ကိုသွားဘို့သူ့ကိုဂုဏ်ယူ" ရဲ့, ငယ်ကောင်လေးချာလီနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ချောကလက်စက်ရုံ-အဆင့်ဆင့်နဲ့သူ့ရဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်ရှုအဖြစ်. ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားအတန်ငယ်အစစ်မှန်စွာဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့မျဉ်းတွေနဲ့ကလေးတွေချွတ်ထုပ်ပိုး mummy အားဖြင့် curbed ဖြစ်ပါတယ်: "ကိုအောကျမေ့. တစ်ခုခု ... ပြေးသငျသညျနှီး အကယ်. တစ်ဦး velociraptor Fancy နည်းနည်း Gray အပေါ် chomping အခါ။ "သေချာတာပေါ့ကအကွံဉာဏျအကြာတွင်အတွက်လာကြလိမ့်မည်.
မကြာခင်မှာပဲလေးတွေဟာကူးတို့သင်္ဘောပေါ်ချွတ်ထုပ်ပိုးနှင့် Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလားဆီသို့ဦးတည်ပို့ကြသည်, တစ်ဦးနိမိတျဆိုးကျွန်းပေါ်သောဖြစ်ပါသည်. အတွင်းပိုင်းကသူတို့ရဲ့လူ့ pals / အနာဂတ်မုကြားတွင်အခမဲ့ရုမ်းမင်းဖြစ်ကြောင်းဒိုင်နိုဆော၏ဝန်ရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦး sarcosuchus ခုန်တက်တူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုနှင့်တစ်ဦးငါးမန်းစားနိုင်! သငျသညျအနညျးငယျ orbs ခန့်လှိမ့်နိုင် (gyrospheres) နှင့်ဒိုင်နိုဆောမှာ gawp! သင်ပင် panama ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်သာမန်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံလိုပဲတန်းစီနိုင်!
အနည်းငယ်မာနထောင်လွှားသိပ္ပံပညာရှင်တက်ပြဆိုပါတယ်လာသောအခါအမှုအရာတစ်နည်းနည်းမှောင်ရ: "ကျနော်တို့ကအရိုးတို့ကိုတူး၏ရာစုနှစ်ထက်မျိုးရိုးဗီဇအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတွင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူပြီ။ " လုံလောက်တဲ့တရားမျှတသော, ထိုအခါမူကားအကြှနျုပျတို့အမှုအရာပတ်ပတ်လည်ဤအချိန်ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားကြသည်ကိုဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်ရန်အဖြစ်သဲလွန်စရ. "တစ်ဦးကတပြင်လုံးကိုအသစ်နယ်စပ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်. ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောဟိုက်ဘရစ်ရှိသည်။ "တစ်ဦးကမျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသော Hybrid, အိုအချစ်ရေ. ငါကမထိန်းချုပ်နဲ့တကယ်ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိသွားလျှင်အံ့ဩခြင်းနှင့်လူသားများအတွက်အစာစားချင်စိတ်များ?
ခရစ် Pratt အသင်းမကျေနပ်သူသည်မိမိနှင့်အတူသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ပြီးသားစုံစုံစကားသည်ပြန်လုပ် / သဘောပြောဆိုရန်လက်ပေါ်မှာ: "သင်ရုံသစ်တစ်ခုဒိုင်နိုဆော သွား. ဖန်တီး? ဖြစ်နိုင်မကောင်းတစ်စိတ်ကူး ". သငျသညျမဆို, ခရစ်. သငျသညျ Pratt ကျွန်းဟုသိ Next ကိုအရာရွှေ့ပြောင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, လူချွတ်ခူးတဲ့ကြသည်နဲ့တခါ placid သိပ္ပံပညာရှင် "RUNNNNNN အော်ဟစ်နေသည်!"ဟုအဆိုပါပြီးသား petrified လေးတွေမှာ.
သငျသညျမူရင်းကြိုက်တယ်နဲ့ Chris Pratt ဘို့က Jeff Goldblum ဖလှယ်စိတ်ထဲမထားဘူးဆိုရင် - ဖြစ်ကောင်းဒါကြောင့်မဆိုးသော - ထို့နောက် Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလားတစ်ဦးအလည်အပတ်တန်ဖိုးရှိဖြစ်စေခြင်းငှါ,, နည်းနည်းသည်းခံခြင်းနှင့်အတူသူတို့အဘို့ကပို Groundhog Day ကိုတူပေမယ့်အစား Bill Murray နဲ့ပြက်လုံး၏မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသော Hybrid ဒိုင်နိုဆောနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မယ်.
Star Wars: အဆိုပါအင်အားစုပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်မှုကိုနှိုးဆျော